जापानसँग राम्रो इतिहास नभएको बेल्जियम क्वार्टरफाइनमा पुग्ला ?
काठमाडौं । विश्वकपको अन्तिम १६ अन्तर्गत आज हुने दोस्रो खेलमा बेल्जियम र जापानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । बेल्जियम समूह ‘जी’ को विजेता बन्दै समूह चरणमा पुगेको हो भने जापान समूह ‘एच’ को उपविजेता बन्दै अन्तिम १६ मा पुगेको थियो । यहाँ हामीले दुई देशबारे केही जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
जापान र सेनेगलको अन्तिम १६ को सम्भावना जीवितै
काठमाडौं । विश्वकपको समूह ‘एच’ अन्तर्गतको खेलमा जापान र सेनेगलले बराबरी खेल्दै अंक बाडेका छन् । आइतबार राति सम्पन्न खेलमा जापान र सेनेगल २–२ गोलको बराबरीमा रोकिँदै १–१ अंक बाँडेका हुन् ।
के एशियाली राष्ट्र जापानले सेनेगललाई पराजित गरेर अन्तिम १६ मा स्थान बनाउला ?
काठमाडौं । आज विश्वकपको दोस्रो खेलमा एशियाली राष्ट्र जापान र अफ्रिकी राष्ट्र सेनेगलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । फिफा बारियताको ६१ औं स्थानमा रहेको जापानले २७ औं स्थानमा रहेको सेनेगलको सामना गर्न लागेको हो ।
तेस्रो मिनेटदेखि कोलम्बिया १० खेलाडीमा सीमित भएपछि जापानको जित
काठमाडौं । विश्वकपको समूह ‘एच’ अन्तर्गतको खेलमा जापानले कोलम्बियालाई पराजित गरेको छ । मंगलबार साँझसम्पन्न खेलमा जापानले कोलम्बियालाई २–१ गोलले पराजित गरेको हो ।
कोलम्बियालाई पराजित गर्न नसकेको जापानले आज के गर्ला ?
काठमाडौं । आज विश्वकपको समूह चरण अन्तर्गत समूह ‘एच’को खेलमा कोलम्बिया र जापान एक अर्कामा भिड्दैछन् । नेपाली समयअनुसार उक्त खेल ५ः४५ बजे सुरु हुनेछ । यहाँ हामीले यी दुई देशको खेलबारे ६ कुरा प्रस्तुत गरेका छौं ।
जापानीजहरु किन दुब्ला र स्वस्थ हुन्छन् ? यस्ता छन् रहस्यहरु
आज विश्वकपमा तीन खेल हुँदै, आजैबाट समूह चरणको दोस्रो राउन्ड सुरु
काठमाडौं । विश्वकपको छैटौं दिन आज पनि ३ खेलहरु हुँदैछन् । आज आज समूह ‘एच’ को दुई खेल तथा समूह ‘ए’ को एक खेल हुन लागेको हो । आजको पहिलो खेल दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बिया र एशियाली राष्ट्र जापानबीच हुन लागेको हो ।
गत वर्षको डिसेम्बरपछि जापानको पहिलो जित
काठमाडौं । जापानले पाराग्वेलाई हराएको छ । पछिल्लो पाँच खेलमा जित निकाल्न नसकेको एशियाली राष्ट्र जापानले पाराग्वेलाई मैत्रिपूर्ण खेलमा ४–२ गोलले हराएको हो ।